Accueil > Gazetin'ny nosy > Raholdina Betaintsofina : Miray tendro amin’ny mpisoloky
Raholdina Betaintsofina : Miray tendro amin’ny mpisoloky
Tratra indray ny adalan’ny depiote Naivo Raholdina, fantatra amin’ny anaram-bositra hoe «Betaintsofina». Sady manararao-pahefana mandrahona olona tsy manan-tsiny ity solombavambahoaka IRD ity no mikàsa ny hamoaka mpisoloky voatazona am-ponja vonjimaika ihany koa. Disadisam-pianakaviana amina resaka ady tany tsy tokony nidirany mihintsy anefa izao hanaovan’i Betaintsofina fanararaotam-pahefana izao. Trangan-javatra tsy mahagaga intsony raha ny fahafantarana ny toetran’io depiote voafidy teny amin’ny boriboritany faha-5 io.
Raha hiverenana kely ny tantara dia misy mpianadahy maromaro no nandova tany tamin’ny ray aman-dreniny eny amin’iny faritr’i Fenoarivo eny Atsimondrano iny. Ny zava-nitranga anefa dia namidin’ny roa tamin’ireo mpianadahy ireo antsokosoko ny ampahany tamin’ilay tany ka taty aoriana vao nahafantatra izany ireo mpandova hafa. Teo no nitranga ny disadisa tao amin’ity fianakaviana ity niravona ihany ny olana rehefa nifandamina ireo mpiray tampoho. Rehefa nandeha anefa ny fotoana, dia nifanaraka indray ireo mpandova rehetra fa hamidy ilay tany mbola lafo ka ny omena ampahany kely amin’ny vidin-tany ireo mpianadahy roa efa nivarotra tany antsokosoko. Nisy mihitsy ny fifanarahana nataon’ireo mpandova rehetra teny amin’ny zandary tamin’izany.
Nahita mpividy tany moa ireto farany ary efa nanome ny vola ilay mpividy fa ny fikarakarana ny taratasy rehetra sisa no nandrasana. Tsy nampoizina anefa ny zava-nitranga satria dia nivadika tamin’ny fifanarahana nifanaovana ireo mpianadahy roa efa nivarotra tany antsokosoko tany aloha, izany hoe tsy neken’izy ireo indray ny hamarotana ny tany. Mazava ho azy fa tsy nanaiky izany ilay mpividy ny tany ka nangataka ny tokony hamerenana ny volany. Nilaza anefa ireo mpianadahy roa fa efa lanin’izy ireo ny vola ka tsy misy hamerenana intsony. Nitory teny amin’ny fitsarana ireo mpandova sasany noho izay fifadiham-pitokisana ka ny volana aogositra lasa teo no nidoboka am-ponja vonjimaika ireo mpianadahy roa.
Teo no niditra an-tsehatra amin’izay i Naivo Raholdina satria namany akaiky ireto mpianadahy mpisoloky ireto. Tsy neken’ingahy depiote mantsy ny nampidirana am-ponja ireo namany ka norahonany mafy ireo mpandova nitory mba hanala haingana ny fitoriana. Voalaza fa nanompa sy nanao teny ratsy variraraka tamin’ireo mpitory i Betaintsofina, ary nandrahona fa hahita raharaha aminy raha tsy mivoaka ny fonja haingana ireo namany mpisoloky. Tsy vitan’izany ihany fa raha ny fantatra dia mbola nanantona ilay olona nikàsa hividy ny tany ity depiote IRD ity, ary notakiany vola 5 tapitrisa ariary satria vitany hono no manome azy an’io tany eny Fenoarivo io raha homena izany vola izany ny tenany.